သင်ချမ်းသာကြောင်း လူတိုင်းကိုကြွားချင်လား? – Lifestyle – Duwun
NZT 2016-06-02 11:52:34.0, 2016-06-02 11:52:34.0
သင်ချမ်းသာကြောင်းလူတိုင်းကိုကြွားချင်လား? ဒါဆို ဖုန်းနံပါတ်လှလှလေးတွေကို ဝယ်ယူုပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးသိလိုက်ပါ။
ဒီလိုမျိုး နံပါတ်အလှလေးတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူတယ်ဆိုတာကလည်း လုပ်ငန်းကိစ္စအတွက် မိမိထံ မှတ်ရတာလွယ်ကူတဲ့ နံပါတ်မျိုးနဲ့ အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုဝင်တွေအားလုံး အရှေ့နံပါတ်ဆင်တူလေးတွေ တန်းစီးပြီးကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူ (၂) ဦး ဆင်တူ နံပါတ်လေးတွေ ကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တမူထူးခြားရယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့ဆိုရင်လည်း မိမိအသည်းစွဲ နံပါတ်လှလှလေးတွေကို စီးပွားတက်အောက်၊ ကံကောင်းအောင် အစရှိတဲ့ ယုံကြည်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရွေးချယ်ဝယ်ယူတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Telenor ရဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးလှပတဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုသုံးပြီး မိမိသူဌေးဖြစ်ကြောင်းပြသလိုက်ပါ။ ယခုဖော်ပြထားတဲ့ နံပါတ်အလှလေးတွေကို ဦးသူယူစနစ်နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာကြောင့် အခုပဲ မြန်မြန်လေး အမှာစာတင်လိုက်ပါ။
ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့ များမှ မှာယူသူများကို အိမ်တိုင်ရာရောက် (Door to Door) စနစ်ဖြင့်ပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အခြားနယ်များကိုတော့ ငွေလွှဲပို့ပေးပြီးနောက် နီးစပ်ရာ ကားဂိတ်သို့ပို့ ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ်အလှလေးတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းများကို အောက်ပါ အတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆင်းကဒ်မျာကိုလည်း ယခုလင့်ကိုနိုပ်ပြီး သွားရောက်ကြည့်ရှုမှာယူနိုင်ပါတယ်။
၁။ 1 SIM - 550,000 KS
၂။ 1 SIM-150,000 KS
၃။ 1 SIM-50,000 KS
၄။ 1 SIM - 35,000 KS